Amaanka Barafka - Svenska Livräddningssällskapet
Dabaasha iyo badbaada doonta
Hem > Olika språk > Somalia > Amaanka Barafka
Marnaba barafka kaligaa ha aadin.
Markasta hayso musmaarka xeriga ku xiran iyo qarabka badbaada ee barafka loogu soo baxo.
Markasta hubi barafka adiga oo isticmaalaya musmaarka dheer (ice-pick) haddii aadan hubin.
Marnaba barafka ha aadin haddii aadan hubin haddii barafka ku celin karo iyo haddii kale. Barafka waa in uu ahaadaa ugu yaraan 10cm dhumac.
Xusuuso barafka cusub, barafka xiling gu'a, baraf ku daboolan baraf iyo barafka badda wuxuu noqon karaa mid qafiif ah.
Baro halka barafka uu ugu jilicsan yahay: sida coska nooca (reeds), kannaaladda, halka markabka ku xirto, buundooyinka, doon sare ah, meelaha biyaha ka shubmaan, dalool wax ka baxaan, dalool wax ka soo galaan, dhawaaqyada, godka biyaha iyo meelaha gunta dhow.
Markasta wax ku hayso inta u dhexeyso adiga iyo qofka dhibaateysan: “gacan u fidis”.
Marnaba caruurta kaligooda ha uga tagin meel u dhow ama barafka korkiisa.
Markasta dadka la socodsii halka aad u socoto iyo goorta la filayo in aad soo laabaneyso.
Meesha ugu fog ee aad tagto, waxay la micno tahay meesha aad u dhamaaneyso ee barafka qafiifan oo jajaba oo sidaa darteed taasina waxay ka dhigeysaa in ay adkaaneyso in lagu badbaadiyo.
Waa muhiim in la ogaado noocyada kala duwan ee barafka iyo waxa caabinaya.
Barafka meel kastana uma eka in meel kasta ka siman yihiin.
Ogow meelaha barafka ugu jilacsan yahay.
Tani waa xirfad loo baahan yahay in aad aqriso oo dadka kale oo qibrad badan u leh kala hadasho.
Waxaa muhiim ah in aad haysato qalabka ku haboon marka aad barafka dibada aad aadeyso.
Halkan waakan qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay in aad horey u qaadato. musmaarka xeriga ku xiran, musmaarka weyn ee faasta kale ah, xarigga badbaadada iyo qalabka daada.
Markastaaba waa in uu kula socdaa ugu yaraan hal qof oo weyn goorta aad dibada barafka u aadeyso aadna haysataa (xarigga badbaadada). In god baraf aad uga soo baxda adiga oo isticmaalaya musmaarka xeriga ku xiran ma ahan mid la isku hubo.
Marka hore tijaabi amaanka barafka….
Waa in aad haysataa qalabka amaanka si aad ugu badbaado barafka:
-musmaarka xeriga ku xiran
-musmaarka weyn ee faasta kale ah